Raharahan’antoko sy fitantanana firenena: notebahin-dRaveloson Constant ny HVM sy ny fitondrana | NewsMada
Raharahan’antoko sy fitantanana firenena: notebahin-dRaveloson Constant ny HVM sy ny fitondrana
Tsy nitsitsy fitenenana. Nitondra valin-kafatra manoloana ireo fanehoan-kevitra nahazo laka tato ho ato Raveloson Constant. Voatsikera ambony ambany ny fitondrana sy ny mpitarika ny HVM.
Tsy niolaka fa nahitsy tanteraka. “ Lalaovin’ny fitondrana mihitsy ankehitriny ny firenena iray manontolo. Tokony hahay handanjalanja sy handrefy tsara ny zavatra lazainy sy hataony ny filoha nasionalin’ny HVM, Rakotovao Rivo, hoe aiza ho aiza isika izao ? Tena miroso mankany amin’ny dingana ho amin’ny fifandimbiasam-pitondrana sa mandeha mirona any amin’ny hoe, tsy misy antoko politika mahazo mifaninana amin’ny mpitondra isika ?”, hoy ny fanambarany.
Manindry ny andraikitry ny Prefet de police
Nohitsiny fa mitady handidy sy hanapaka amin’ny zava-drehetra eto amin’ny firenena ny mpitarika ny HVM ary efa karazan’ny manitsaka sy mitsabaka amin’ny andraikitry ny hafa. “Efa nanitsaka ny andraikitry ny hafa izy tamin’ny “Raharaha Razaimamonjy Claudine”. Izao indray manindry ny andraikitry ny Prefet de police na somary ankolaka aza…”, hoy ihany ity mpanao politika ity.
Ankoatra izany, nitondrany valin-kafatra koa ny minisitry ny Fizahantany, Ratsiraka Roland. “Sary tsara ho an’Antananarivo eo amin’ny sehatry ny fizahantany ny famelana ny mpanao politika halalaka amin’ny fanehoan-keviny sy hanao politika malalaka”, hoy Raveloson Constant.
Loza mitatao ho an’ny demokrasia
Nohitrikitrihiny fa tokony hanaovana lakolosy fanairana izao tranga miseho eto amin’ny firenena izao satria mitady hiverina any amin’ny taona 1990 isika. “Nijoro ny mandantehezam-pirenena miaro ny tolom-piavotana tamin’izany ka tsy afa-naneho hevitra na nalalaka ireo antoko na mpanao politika tany ivelan’io vovonana io… Tena loza mitatao ho an’ny demokrasia ireny fanehoan-kevitry ny mpitondra tato ho ato ireny ”, hoy izy. Notsiahiviny fa tsy mitovy ny tamin’ny taona 2009 ny amin’izao fotoana izao. Hetsika nandrobana sy nanaovana sorona ny vahoaka ny tamin’izany. “Hetsika fankalazana tsotra ny faha-15 taon’ny antoko Tim ny amin’izao fotoana izao”, hoy izy.
Nanteriny fa fotoana izao tokony hampisehoan’ny antoko Tim ny momba azy, taorian’ny nialan’ny mpanorina Ravalomanana teto an-tanindrazana sy nandaozany ny fitondrana ary koa ny tsy fahafahany nilatsaka hofidina noho ny fepetra “Ni… ni” napetraky ny fianakaviambe iraisam-pirenena.
Mbola mpikambana MFM
Momba ny raharaha anatin’ny antoko MFM, misy azy kosa indray, nambarany fa mbola eo anivon’io antokon’ny “Mafana” io ny tenany. “Malalaka amin’ny fanehoan-keviny ny mpikambana ary malalaka amin’izany ny tsirairay. Anisan’izany izahay”, hoy izy. Nambarany fa nisafidy nanohana an-dRavalomanana Lalao ny tenany tamin’ny fifidianana ben’ny Tanàna farany teo. “Tsy resaka seza izany fa tena noho ny tanàna sy ny tanindrazana iombonana…”, hoy Raveloson Constant.